Kaddib Goolkiisii 21aad Ololahan, Waa Maxay Rikoorka Uu Messi Jabinayo? – Garsoore Sports
Kaddib Goolkiisii 21aad…
Cayaaryahanka kooxda Kubbada-cagta ee Barcelona iyo xulka Argentina Lionel Messi ayaa xalay gaaray rikoor taariikhi ah kaddib kulankii ay kooxdiisa Barca xalay natiijo 4:1 ah ku dardareen kooxda SD Huesca kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Lionel Messi ayaa lagu amaanay inuu yahay “kii sixirka ahaa” kaddib markii uu barbarreeyay rikoorkii Xavi ee safashada kooxda waxaana uu rikoorkan ku calaamadeeyay labo jeer oo uu shabaqa soo taabtay kulankii xalay.
Xiddiga reer Argentine ayaa ciyaaray kulankiisii ​​767-aad ee Barca Isniintii shalay ahayd waxaana uu dhigi doonaa rikoor toos ah haddii uu Axadda wajaho kooxda Real Sociedad.
Saaxiibkiisii ​​hore ee kooxda Barcelona Arturo Vidal ayaa bartiisa Instagram ku soo qoray: “Hal walaal oo rikoodh kale ah @leomessi. Adigu waxaad tahay macalinka kubbada-cagta, Adiga ayaa ah kan ugu fiican, heer caalami, midka kaliya, ee sixirka ah.”
Xavi, oo haatan ah tababaraha kooxda heysata horyaalnimada Qatar ee Al Sadd, ayaa ku amaanay saaxiibkii in uu soo barbarreeyay rikoorkii uu dhigay isagoo usoo qoray: “Hambalyo Leo !! Sharaf ayey tahay inaad rikoorkaan dhigto.”
Guushii 4-1 ee ay ka gaareen Huesca ayaa ku sababtay inay Barcelona afar dhibcood u jirto kooxda hoggaanka haysa ee Atletico Madrid, kuwaasoo kaliya badiyay labo ka mid ah shantii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka.
Labada gool ee Messi ayaa ka yimid meel ka baxsan xerada ganaaxa, kabtanka kooxda ayaa caado ka dhigtay dhawaanahan inuu goolal ka dhaliyo meel fog waxaana uu ku Camp Nou ku qaadanayaa xilli-cayaareed wanaagsan isagoo hoggaanka u haya gooldhalinta, caawinta iyo qiimeynno kale oo horyaalka ah.